शैक्षिक सोचमा पश्चिमी धमिरो | चितवन पोष्ट
शैक्षिक सोचमा पश्चिमी धमिरो
हरेक समृद्ध मुलुकले शिक्षा र शिक्षित वर्गलाई विकासको बाटोमा अगुवा बनाएर नवीनतालाई अपनाउँछन् । प्रायः विकसित देशमा शिक्षित वर्गबाट प्रक्षेपित विचारसँग राजनीतिक दृष्टिकोण सञ्चालित हुन्छ । वास्तवमा निःस्वार्थ भावसँग राजनीतिगत हाँगोभन्दा पर रहेर देश, विदेश र विकासको सर्वोत्कृष्ट सल्लाहकारमा विज्ञ तथा प्राज्ञिक वर्ग रहन्छन् । ओहोदाको लालचभन्दा विचारको वाण प्रहार गर्ने तिनले भूत र वर्तमानलाई केलाएर भविष्यको प्राक्कल्पनालाई पस्कन्छन् । तथ्यपरक तर्कको आडबाट देश र परिवेशलाई बोल्ने गरेकाले नै समृद्ध मुलुकले विकासको अग्र स्थानमा शिक्षालाई स्वीकार गर्दछ । शिक्षा र चेतनासँग अत्याधुनिक जगको तादात्म्यता गाँस्न पुग्दोरहेछ । आज हामी शिक्षालाई विकसित तुल्याउनु भनेको आधुनिकीकरण (मोडनाइजेसन) र पश्चिमीकरण (वेस्टनाइजेसन) भनेर बुझ्न थालेछौँ । गुणस्तरलाई नै पश्चिमा शक्तितिरको अध्ययनबाट अब्बल हुने सोच बसेछ । नेपालीपनको मौलिकता भुल्नुमा दुःख नै लाग्न छोडेछ । तर, आधुनिकीकरणको अर्थ पश्चिमीकरण त पक्कै होइन । आफ्ना प्राचीन कला, संस्कृति, ज्ञान–विज्ञानका शिल्पलाई मारेर अर्काको संस्कारलाई बोक्नु पनि होइन ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ– “हामी अनुसन्धानमा विदेशको सिद्धान्तलाई बोक्दा महान् ठान्दै छौँ । आफ्नालाई थोत्रा पुराना भन्न थाल्यौँ । अर्कोतिर हामीले आफ्नोपनालाई बिर्सँदा ‘नारदवाद’ या ‘प्रल्हदवाद’ या अन्य कुनै सिद्धान्त किन जन्माउ सकेनौँ । म मात्रै राम्रो भन्ने एकथरीको रटना पनि गएको छैन ।” यसरी हेर्दा विज्ञका ठूला–ठूला अनुसन्धानमा पश्चिमीकरण हुनुपर्ने बाध्यताले दिमाग भरिइरहँदा हाम्रो आफ्नोपना कहाँ छ ? – प्रश्न त उब्जिन्छ । तसर्थ शिक्षाविद् कोइरालाको विचारतिर नियाल्दा दुईटा कुरा खराब हुन्– ज्यानमारा र ज्ञानमारा । हुन पनि सत्य हो≤ हामी कोही पनि पानीमुनिको ओभानो बन्न सक्दैनौँ – कुनै समयमा कतै न कतैबाट ज्यानमारा बनेकै थियौँ । आज विज्ञान र विकास भन्दै आफ्ना परम्परालाई पश्चिमीकृत गर्दैछौँ । विज्ञको दिमागमा पनि यस्तो भान हुन थालेछ– अनुसन्धान दर्बिलो बन्न अङ्ग्रेजी सन्दर्भ सामग्री (सोर्सेस) को अध्ययन अनिवार्य छ । नेपाली अनुवादभन्दा भरसक अङ्ग्रेजीका कुरा र विचार अनि सिद्धान्तको घुलन भएमा त्यो राम्रो र उत्कृष्ट बन्ने बोध बढेछ । सानातिना मान्छेका जतिसुकै महान् विचार पनि बेकार हुँदा रहेछन् ।
आज सिद्धान्तविनाको अनुसन्धान खोक्रो मानिँदै गर्दा अनुसन्धाताले आफ्नो सिद्धान्त जन्माएर प्रमाणित गरेको बेआधार मानिन्छ । भावहरण र शिक्षाको खेतीमा बढाबढ अत्याचार अनि लापर्बाहीका चाङ– प्रमाणपत्र निर्माण, शोध अध्ययनमा जथाभावी, चोरी प्रवृत्ति र राजनीतिक पूर्वाग्रह सबै यसमा ज्वलन्त उदाहरण बन्दैछन् । हुन त हो, कल्पनाको महासागरमा दौडिएको अनुसन्धान उपाधि ग्रहणका लागि सीमित बन्छ । अनुसन्धाता कुइरोको काग बनिरहन्छ उता शोध निर्देशकले पनि सक्दो आफ्नो दिमागमा भरिएको बोधगम्यता नै पस्कन्छन् । व्यावहारिकताभन्दा अन्योलता बढी । अध्ययनभन्दा सार्ने कामै बढी । विश्लेषणको गुदी एउटा अनुसन्धानमूलक लेखमै पनि आइहाल्छ । देशले मागेको र चाहेको पक्षमा देशकै परिवेश अनुकूल अध्ययन गरे के हुने ? अर्काको आधार आफ्नो तर्क र व्यवहार आए अनुसन्धान बन्ने कि नबन्ने ? यसको अर्थ अर्काको सारेर विश्लेषण गरेपश्चात्को अनुसन्धानमात्रै उत्कृष्ट भन्ने सोचमा अनुसन्धानको हलो मज्जाले अड्केको छ । यो देशले आफ्नोपनको धारबाट सबल अध्ययन गर्न सक्दैन र ? यहाँका उपाधि, देशभित्रका शैक्षिक प्रमाणलाई किन कमजोर मान्ने सङ्कीर्णता रहिरहन्छ ? हामीले युधिष्ठिरको शासनलाई साहित्यबाट सिद्धान्तमा बदले के हुन्छ ? हामीले आफ्नोपनामा बाँच्नका लागि पश्चिमी सिद्धान्तलाई काँधै हाल्ने हो भने र हेर्ने नै हो भने हाम्रो आफ्नोपना कहाँ छ ? प्रश्न ओझिलो होइन र !
बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने विषय भनेकै आफ्नो कला संस्कृतिसँग रहेर अरुको अध्ययन गर्ने हो भन्ने ठम्याइ हो । विज्ञले मानून् नमानून् सत्यतामा रहँदा आफ्नो हठी प्रवृत्तिलाई तोड्ने कानुन अनुसन्धानमा आवश्यक छ । स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाशास्त्र वा विद्यावारिधिमा कमसेकम दुई वा सोभन्दा बढीको निर्देशन भए राम्रो हुने थियो कि ! दुःखको कुरा तर्कले जित्ने र व्यावहारिक पक्षले जित्ने पाटोमा राजनीतिगत खिचडीको चाकडीमा शोधार्थी चेपिन्छ । व्यक्ति सक्षम आफ्ना ठाउँमा हुन्छन् तर अध्ययन र मूल्याङ्कनको कसीमा आफ्नोपनालाई जोड दिए के हुन्छ ? अर्काले गरेको साहित्यको पुनरावलोकन (लिट्रेचर रिभ्यु) भन्दा ठूलो अध्ययनमा आएको नयाँपन र व्यावहारिकता पनि त चाहिन्छ ।
हाम्रो देशका हरेक पार्टीका वाद र विचार बाहिर देशका विद्वान्को आडमा ठोकिएका छन् । यहाँ बुद्ध र अहिंसावाद कि जन्मिएन, राजर्षि जनक जस्ता राजा थिए जो राजा र ऋषि दुवै हुन् । रामराज्यको भाषण र पञ्चशीलका गफमा माक्सको साम्यवाद कसरी कहाँनेर मिलाउने ? छक्क पर्ने कुरा ज्ञानको विस्तार विश्वव्यापीकृत परिवेशमा यान्त्रिकीकृत अनुसन्धानसँग भन्दा उत्तरआधुनिकता होस् या डेरिडाको विनिर्माणलाई माथि राख्दा या त फिल्मोर र पाणिनिलाई अध्ययन गर्दा समय र अवस्था किन चुक्छ । दुवैलाई जोडेर हेरौँ न । हामीले ‘युधिष्ठिर राजनीति सिद्धान्त’ जन्माउँ या ‘विदुर नीति’ सँग राजनीतिको अध्ययन गरौँ । माक्र्सको सिद्धान्त अवश्य विश्वव्यापी सम्मानित छ तर के सधैँ माक्र्सको पूजा र माक्र्सभक्त बन्दा मदन भण्डारी, बीपी या अरु यतैका विद्वान् अनुकरणीय देखिन्नन् ? गान्धीवादी हौँला, माक्र्सवादी हौँला या फुकोको सिद्धान्त अर्थात् फल्क सिद्धान्त सबै हिजोका लागि हुन् । आज र अबका लागि अबका अनुसन्धातालाई मान्ने कि नमान्ने ? अर्को कुरा यो संसारमा हजारौँ दार्शनिक, राजनीतिज्ञ जन्मेलान् तर सबैको सिद्धान्त महान् बन्ने र नाम कन्ठ पारिरहने हो भने विद्यार्थीले आफ्नोपनालाई कहाँ घुसाउने ? हिजो बच्चाले रोएको बेला आमा….. भन्दै रुन्थ्यो अहिले हामीले अरुको नक्कल ग¥यौँ अनि बच्चाले रुन्छ मम्मी…….। यी कुरा वाहियात भन्नुहोला तर सोच्नुहोस् त रुँदा पनि अङ्ग्रेजीमा रुनु पर्ने रे । थारुमा रुन किन नमिल्ने ?
मैले शिक्षाविद् कोइरालाको एउटा कक्षामा उहाँको सिद्धान्त र विचारलाई सुनेँ । गजब लाग्यो उहाँले बनाउनुभएको रहेछ एउटा हाम्रो प्राङ्गारिक सिद्धान्त जसको नाम रहेछ– भैँसी सिद्धान्त । साह्रै दिलचस्पी लाग्यो । चाहे संस्कृति र परम्परासँग जोड्दा त्यहाँ फल्क थ्यौरी आओस् नआओस् तर त्यसको गुणात्मकताले अध्ययन किन मापनीय बन्दैन ? कुरो गम्भीर के भने हाम्रा पुर्खाले ढिकीको सृजना गरे । जाँतो बनाए । सायद पश्चिमा मकैको बिउ खोज्दै थिए होलान् । मोही पार्न मदानी, घुर्रो, नेती अर्थात् नरिवलको डाडु बनाए । बाँसको ढुङ्ग्रो बनाए । चोया निकालेर दाम्लो बाटे । पाट, सनपाट, हातेआरीजस्ता वनस्पतिलाई प्रयोग गरे । तेर्सो रुखको मुढोलाई हलो आकृतिमा बदल्ने कला, ज्यामिर, कागति पेलेर अमिलो बनाउने तरिका या त तोरी पेल्ने कोल । पानी घट्ट, दाम्लो बाट्ने, गुन्द्री अर्थात् राडी बुन्ने तान सबै हाम्रा विज्ञान होइनन् र । आज परनिर्भरताको पराकाष्ठालाई हेर्दा हामी अत्यन्तै यस्ता विज्ञताबाट टाढा बन्दै गएको स्पष्टै छ । हामीले हाम्रा पुर्खाका ज्ञानलाई माथि उठाउन नसकेकै कारण यान्त्रिक विकासमा परनिर्भर बन्नुपरेको हो । आफ्नोपनलाई विकसित तुल्याउन नसक्दा भाषा, संस्कृति र सोच नै पछौटेपनतिर मोडिएको देखिन्छ । यसर्थ आज हामी ज्ञानमारा भइरहेका छौँ ।
हिजो हाम्रा ऋषिमुनिले लेखेका ज्ञानका ठेली आज र भोलिका लागि पनि उत्तिकै अकाट्य छन् भन्ने कुरा पनि सोचनीय छैन त । त्यसो हो भने पश्चिमीकरण नै आधुनिकीकरण त पक्कै होइन । किताबका ठेली र विज्ञका विचारमा गुरुकुल शिक्षामा स्वतन्त्रता र क्षमताको सम्मान हुन्थ्यो । सत्यता र कानुनको पालना अत्यावश्यक बन्यो । राजालाई पनि कानुन लागेकै हो, श्राप लागेकै हो, अपराध भोगेकै कुरा छन् । यसो भन्दा विकृत छरपस्ट भेटिन्छन् तर टाठाबाठाको हालीमुहाली भएका र भइरहेका विचार र विद्रोहका कुरालाई हेर्ने हो भने माक्र्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादपछिको साम्यवाद ठूलो कि रामराज्य – भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । माक्र्सले हिजोका लागि भनेका सबै कुरालाई सत्य मान्ने हो भने बौद्धिक प्राणी मानिसले बलवान् हात्तीलाई तह लगाउने कार्य गर्नु पनि दमन नै हो । यसो भन्दा म दमनकारी सोचको पक्षपाती भन्ने दोषी अवश्य होइन ।
सिद्धान्त सबैको पढ्नु अवश्य पनि मार्मिक पक्ष हो तर अङ्ग्रेजी फोस्रा सिद्धान्त पनि महान् नै हुन् भन्ने गलगिज्ज लदाउने नीति पक्कै पश्मिीकरणको खोस्टो मात्र हुन् जुन हाम्रो मुलुकका लागि अब पुरानै हुन् । प्रविधि अपनाऔँ तर संस्कृति नमारौँ । हामीले आफ्नै लागि आफ्नो बनाएर बाँचे कसैको हेपाईमा पर्नुपर्दैन । आज हामीले कोरियन भाषा पढ्छौँ, जापानिज पढ्छौँ, अङ्ग्रेजी घोकाउँछाँै तर संस्कृत, मातृभाषा या त नेपाली थोत्रो मान्छौँ । प्राचीन ग्रन्थ, पुराण कथा सुनाउनका लागि भन्दा धेरै मान्छेलाई आचरण सिकाउनका लागि हुन् ।
हिन्दू धर्मभित्रैकै हो गुरु वृहस्पतिद्वारा प्रतिपादित चार्वाक दर्शन जसले ईश्वर र अभौतिक वस्तुलाई बेआधार ठान्छ । जीवन नै सबैथोक मान्दै मानव जीवन बाँचुन्जेल आनन्दले बाँच्न आग्रह गर्छ । हामी यस्तो संस्कारबाट परिपोषित रहेछौँ जसले संस्कृत भाषालाई त पूजापाठ र हिन्दू धर्मका धर्म गुरुको पेवा सम्झन्छौँ । तर, वेदव्यासको वेद हिन्दू धर्मका ठेकेरादको पेवा होइन । वेदव्यास हिन्दू थिएनन् । बुद्ध बुद्धिस्ट थिएनन् । सबै धर्म र संस्कारको दायराले मान्छेको मानवतालाई सीमाङ्कन गर्नु आपैmँमा सङ्कुचन हो । भलै ज्ञान सरोकार सम्बन्धितमा बढी होला तर ज्ञानका कुरा मानिस र प्राणी तथा प्रकृतिका लागि हितकारक हुन् र हुनुपर्छ पनि ।
(लेखकः आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, धादिङमा प्राध्यापन गर्छन् ।)
ब्रेकर ः १
आज परनिर्भरताको पराकाष्ठालाई हेर्दा हामी अत्यन्तै यस्ता विज्ञताबाट टाढा बन्दै गएको स्पष्टै छ । हामीले हाम्रा पुर्खाका ज्ञानलाई माथि उठाउन नसकेकै कारण यान्त्रिक विकासमा परनिर्भर बन्नुपरेको हो । आफ्नोपनलाई विकसित तुल्याउन नसक्दा भाषा, संस्कृति र सोच नै पछौटेपनतिर मोडिएको देखिन्छ । यसर्थ आज हामी ज्ञानमारा भइरहेका छौँ ।
ब्रेकर ः २
यो संसारमा हजारौँ दार्शनिक, राजनीतिज्ञ जन्मेलान् तर सबैको सिद्धान्त महान् बन्ने र नाम कन्ठ पारिरहने हो भने विद्यार्थीले आफ्नोपनालाई कहाँ घुसाउने ? हिजो बच्चाले रोएको बेला आमा….. भन्दै रुन्थ्यो अहिले हामीले अरुको नक्कल ग¥यौँ अनि बच्चाले रुन्छ मम्मी…….। यी कुरा वाहियात भन्नुहोला तर सोच्नुहोस् त रुँदा पनि अङ्ग्रेजीमा रुनु पर्ने रे । थारुमा रुन किन नमिल्ने ?